मानिसको लागि गरिबी सवैभन्दा ठूलो रोग हो : श्रेष्ठ - Always Tourism
वि.स. २०११ सालमा बनेपामा जन्मनु भएका डा. भुषण श्रेष्ठ पेशाले डाक्टर हुनुहुन्छ । २ दिदीकाे भाइ अनी २ भाइकाे दाइ श्रेष्ठले प्रवेशिका परिक्षा आनन्दकुटी विद्यापिठ स्वयम्भूबाट गर्नुभएको हो । अमृत साईन्स क्याम्पस ठमेलबाट आइ एस्सी उतिर्ण हुने वितिकै रसियामा डाक्टर अध्ययन गरी सन् १९८२ मा नेपाल फर्कनु भएका श्रेष्ठले विर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल अनि चौतारा जिल्ला अस्पतालमा १० वर्ष सरकारी सेवा गरिसकेपछि सरकारी जागिर छाडेर वनेपामा रहेको सिर मेमोरियल अस्पतालमा तिन वर्ष काम गर्नु भयो । गरिब दिन दुखीहरुको सेवा गर्नलाई आफनै मातहतको अस्पताल आवश्यक रहेको तथ्य मनन गरी वहाँले विगत २० वर्षदेखि वनेपा वजारमा १५ सैयाको कृष्णप्रसाद अस्पताल संचालन गर्दै आउनु भएको छ । अति विपन्न तथा निम्न मध्यम वर्गका विरामीहरुलाई सेवा दिने उदेश्यले संचालनमा रहेको अस्पताल यस क्षेत्रमा प्रख्यात छ । बुढेस कालको जिन्दगीलाई केही आरामदायी अनि मनोरञ्जन पेशामा बिताउने लक्ष्य सहित एक वर्ष अघिबाट वनेपा बजारमा होटल सत्यम संचालन गर्दै आइरहनु भएको छ । वहाँको एक छोरा र एक छोरी दुवै डाक्टरी पेशामा सक्रिय हुनुहुन्छ । सकारात्मक सोच लिई युवा जोशका साथ कार्यक्षेत्रमा क्रियाशिल डा. भुषण श्रेष्ठसँग भुमराज तिवारीले गर्नु भएको वार्तालाप ।
६५ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय जीवन विताइरहनु भएको छ, आफुलाई कस्तो महशुष भइरहेको छ ?
स्वास्थ्य नै सवैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने आत्मवोध छ मसँग । हुन त मैले डाक्टर पढे र अझ यस विषयमा केही तथ्यगत विषयवस्तु अध्ययन एवम मनन गर्ने मौका पाए । सवै मानिसको बाचुन्जेलको लक्ष्य स्वस्थ्यसँग बाँच्ने हुन्छ तर जीवनशैली र खानपान अनि वातावरणको कारण विभिन्न रोग, अवस्थासँग जुधिरहेको देख्छु । बाचेको समयप्रतिको न्याय भनेको हामीले विताएको पलहरु हो जुन स्वस्थ्य हुन आवश्यक छ । स्वस्थ्य हुन सकारात्मक सोचले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
दैनिकी कस्तो छ, तपाईको ?
म हिड्न असाध्यै मन पराउने मान्छे हुँ । जरुर काम वाहेक म गाडी चढ्दिन । तपाईको हिडाँइसँग धेरै रोगहरुको सम्बन्ध निधार्रण हुन्छ । त्यसैले हिड्नु सदैव लाभदायक छ । म बिहान यताउता हिडडुल गर्छु । अस्पतालमा फलोअप र चेकजाँजको काममा पनि सक्रिय हुन्छु । करिव १० बजेतिर खाना खान्छु । भेटघाट तथा अस्पतालको काममा संलग्न हुन्छु । पछिल्लो समय अस्पतालमा छोरालाई सघाई राखेको छु । बेलुकीको खाना ४ बजेतिर खान्छु । बेलुकीको खाना सकेसम्म कम अनि अलि छिटै खानुपर्दछ । परिवारसँग समय विताउँछु । धेरै दौडधुप मन पर्दैन ।
स्वस्थ्य रहन के गर्नुपर्छ ?
सकारात्मक सोच सहित जीवन जीउनु पर्दछ । खाना एकदमै आवश्यक मात्र ठिक समयमा खानुपर्दछ । हिड्नु भनेको स्वस्थ्य हुनु हो । क्यान्सर, सुगर, मुटुका रोगीलाई हिडाईले धेरै फाइदा पु¥याँउदछ । खालि पेटमा ग्याँसट्रिक हुदैन । खाना खाने समय मिलाउनु पर्दछ । पानी प्रशस्त्र पिउनु पर्दछ । सामाजिक गतिविधिहरुमा पनि सरिक हुनुपर्दछ । ठिक्कको व्यस्त रहनाले स्वस्थ्य हुनलाई फाइदा पुग्छ ।
मानव जीवनको सवैभन्दा ठूलो रोग के होला ?
मेरो विचारमा गरिबी सवैभन्दा ठूलो महामारी रोग हो, जसबाट मानिस उम्कन सकेन भने सधैव रोगको वरिपरि रहिरहन्छ । गरिबी भन्दा ठूलो रोग नै छैन । किनकी बाँच्नको लागि न्यूनतम सुविधा आवश्यक पर्दछ । खानपान पनि गरिविसँग जोडिएर आउँछ । त्यसैले जो मानिस गरिब छ उसँग धेरै रोगहरु हुन्छन । हामी सवै गरिबिबाट बच्नु पर्दछ । विना पैसा रमाउन सकिदैन, घुम्न, हिड्डुल गर्न सकिदैन । त्यसको मतलव सवै खुसी पैसाले किन्न सकिन्छ भनेको होइन । गरिबीवाट माथि उठ्न सक्नु सर्वथा मानवहितमा छ । गरिबीबाट बच्न वितिय साक्षरता आवश्यक छ ।
पुर्नजन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
म विश्वास गर्दिन । रोग नलागी खुसी साँथ बाच्न सके यही जीवन सार्थक छ ।
घुमघाम कतिको मन पर्दछ ?
घुम्नु मेरो सौख थियो । डाक्टर पढ्दा लगभग पुरै युरोप घुमे र त्यहाँको जीवनशैलीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर मिल्यो । छिमेकी देश भारतको केही भुभाग पनि घुम्ने मौका पाएको छु । नेपालको केही प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा, चितवन लगायत केही भु भाग घुम्या छु ।
नेपालको घुम्न अझै बाँकी छ ?
मेरो डाक्टरी पेशाको कारण खासै नेपाल घुम्ने र रमाउने अवसर पाएको छैन । म अहिले ६५ वर्षको भए अव २० वर्ष म सक्रिय जीवन विताउन सक्छु भन्ने अनुमान छ । मेरो अव वाँकी समय नेपाल घुमेर, हेरेर विताउने रहर छ । विदेश घुम्न जाने कुनै रहर छैन । नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा घुलमिल हुदै रहनसहन तथा जनजीवनसँग साक्षात्कार गर्दै हिड्ने सौख छ । मैले मनमौजीसँग घुम्न नपाएकोमा पछुतो छ । तर अव परिवारको दायित्व निकै कम छ । म लामो लामो श्वास फेर्दै हिड्न अनि प्रकृतिसँग रमाउन चाहान्छु ।
घुमफिरको लागि कुन चाँही मौसम उपयुक्त होला ?
वर्षा र जाडो मौसम उपयुक्त लाग्छ । गर्मी मौसम त्यति उपयुक्त लाग्दैन । तर नेपाल घुम्नलाई सदैव उपयुतm छ । हाम्रोमा तिन खालको हावापानी छ । हिमाली, पहाडी र तराईको हावापानी मौसम अनुसार फरक छ । सकेसम्म घुम्दा पनि हिडाईलाई प्राथामिकता दिनुपर्दछ । गाडीमा मात्र घुमेर हुदैन ।
डाक्टर मान्छे होटल संचालन गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
उमेर अनुसार स्वभाव अनि रुचि फरक हुन्छ । अव डाक्टरी पेशाबाट विस्तारै गुमनाम हुदै छु । मान्छेहरु घुमेको देख्दा मलाई त्यसले धेरै प्रेरणा दिएको छ । अस्पतालमा विरामीहरुको विचमा रहिरहनुपर्ने तर अव उमेरले केही आराम अनि घुमघाम तथा मनोरञ्जन खोजेको छ । त्यसैले होटल संचालन गर्दा घुम्न आएका मान्छेहरुसँग भेट हुन्छ । आफुलाई अझ घुम्नलाई प्रेरणा पनि मिल्छ । होटल व्यवसाय अरुको खुसीमा रमाउने पेशा हो । वनेपामा स्तरिय होटल नभएको अवस्थामा मैले यो होटल खोल्ने प्रयत्न गरेको हुँ ।
बनेपाको विच शहरमा सत्यम होटल संचालन गरीरहनु भएको छ, कस्तो छ सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ?
होटल मेरो आफनो रहरले खोलेको हो । ठ्याक्कै वनेपाबाट पनौति जाने चार दोवाटोमा होटल छ । होटल भित्रको वातावरण शान्त छ । अहिले २२ वटा कोठाहरुमा पाहुनालाई सुविधा दिइरहेका छौ । पर्यटकिय स्तरको होटल वनेपामा हालसम्म छैन । वनेपा पुरानो शहर भएर पनि व्यापारिक केन्द्र मात्र बनिरह्यो । यहाँबाट हिमाल देखिदैन । हिमाल नदेखिदैमा होटल संचालन नहुने होइन । धुलिखेल पर्यटकिय हिसावले उर्वर क्षेत्र छ । त्यसैगरी पनौती अनी आसपासका गाउँहरु पनि पर्यटकीय हिसावमा अघि बढिरहेको अवस्थामा वनेपामा पनि स्तरिय खालको होटलको महशुष गरी सत्यम संचालन गरेका हौ । यो पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको एक वर्ष भयो । होटलमा सभा, सम्मेलन गर्नको लागि ठूलो हल छ । साथै पर्याप्त पार्किङको सुविधा पनि छ । हाम्रोमा व्रेकफास्ट निशुल्क छ । आएका पाहुनाहरु खुसी हुनुहुन्छ । हाम्रो शुल्क एकदमै न्यून मूल्यमा छ । किनकी अहिले हामीले यसलाई प्रमोशनल शुल्कमा बेचिरहेका छौ । स्वदेशी विदेशी दुवै स्तरका पाहुनाहरु खुसी हुन सक्ने वातावरण छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि होटल संचालन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
वनेपा माथिको अाेपीडाँडामा २३ रोपनी जग्गामा अग्यानिक खेतिपाति सहितको रिर्सोट संचालनमा ल्याउने तयारी हुदै छ । त्यहाँबाट नगरकोट र धुलिखेलबाट देखिने सवै हिमाली श्रृंखलाहरु देखिन्छ । हावापानी पनि राम्रो छ । नेपालको पर्यटन आन्तरिक पाहुनाहरुले पनि चलायमान हुन थालेको छ । होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नु अव राम्रो व्यवसाय हो । हामीले केही वर्षभित्रैमा त्यहाँ रिसोर्ट संचालनमा ल्याउँदै छौ ।
५ साउन,काठमाडाै।बाल विवाहमा संलग्न भएका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका–१ बस्ने २४ वर्षीय नारायणप्रसाद तिवारीले १७ वर्षीया किशोरीलाई...